I-Ranch Bunkhouse kwiLizwe eline-King Bed
Indlu yeendwendwe yabucala enendawo yokuphumla ebekwe ezantsi kwendawo yebhari enebhedi enkulu kunye negumbi lokuhlambela labucala. Indawo entle yokuphumla kwaye uphumle. Sikwifama yeehektare ezi-6 kwi-Evergreen Valley enoxolo ye-Olympia kwaye malunga nemizuzu eyi-15-20 ukusuka kuhola wendlela. Indawo yethu yelizwe izolile kwaye iyahlaziya. Sinamahashe, iiponi, iinkukhu, izinja kunye neekati (akukho zilwanyana zangaphakathi) ke yiza wonwabele izinto ezibonwayo kunye nezandi zefama yethu. Ndicela uzenze ekhaya.
Indlu yeendwendwe zakho ibekwe emazantsi kwindawo yethu yesitora enomnyango wabucala. Kukho ibhedi yenkosi kunye negumbi lokuhlambela labucala. Akusayi kubakho zilwanyana zikhulu esibayeni ngexesha lokuhlala kwakho kodwa uya kukwazi ukujonga ezinye zazo kwifestile yakho. Ikhitshi lethu libandakanya i-microwave, i-oveni yokuhambisa, imbiza yokupheka, imbiza yombane, itoaster, umenzi wewaffle, umxube wezandla, umshicileli waseFransi, umenzi wekofu kunye nesiqandisi esipheleleyo. Iimbiza neepani izitya kunye nesilivere ngokunjalo. Sikwanayo nebhodi yeayini kunye ne-ayina.
Sihlala phantsi kwendlela ende (hlala ngasekhohlo ukuya endlwini yethu) kwaye ezinye izindlu ezi-2 ngamalungu osapho. Le yayikade iyifama yobisi yeehektare ezingama-80 ngoku eneendawo zokuhlala ezi-3 kuyo. Le propathi inoxolo kakhulu kwaye ifihliwe ngemibono ebukekayo. Siyimizuzu eyi-15 ukusuka kuhola wendlela kunye neyure e-1 ukusuka eSeattle, iiyure ezi-2 ukusuka ePortland, iiyure ezi-1 1/2 ukusuka elwandle kunye neyure eyi-1 1/2 ukusuka ezintabeni.
Sihlala kwindlu esecaleni kwaye siya kufumaneka ngefowuni okanye ngokobuqu ukuba kukho imibuzo. Siyakonwabela ukudibana nabantu kunye namava okuva kunye namabali. Siyayihlonipha imfihlo yakho nangona kunjalo.